ESA waxay sii deyneysaa Cate, oo ah barta lagu falanqeeyo cimilada | Saadaasha Shabakadda
ESA waxay sii deysaa Cate, oo ah iskuxirka falanqaynta cimilada
Qaarkood waxay ugu yeeraan kacaankii 4.0, qaarna kacaankii dhijitaalka ahaa, internetka waxyaabaha, ama si fudud mustaqbalka. Waxaan ka hadleynaa xogta, kuwa la duubi karo oo ugu dambeyntii lagu shaqeyn karo iyada oo loo marayo falanqeyn habboon. Haddii in yar ka hor waxaan ka hadlaynaa Xogta WeynMaanta waa inaan ka hadalnaa moodooyinka la saadaalinayo, oo awood u leh jilitaanka xaaladaha suurtagalka ah iyo kuwa suuragalka ah ee mustaqbalka. Dabcan, kiiska taabanaya, saadaasha hawada. Markan, iyo fududeynta adeegsiga aaladahaan, ESA ayaa hada soo baxday Cate, oo ah is-dhexgal kaas oo looga shaqeyn karo moodooyinka saadaasha hawada.
Cate, waa maktabad Python ah (mid ka mid ah luqadaha ugu caansan barnaamijyada tirakoobka adduunka) oo loogu talagalay gabi ahaanba falanqaynta cimilada ee ka kala socota meeraha kala duwan ee meeraha. Iskuxirkani wuxuu ururiyaa qiyamka saldhigyada saadaasha hawada ee kaladuwan ee ku baahsan adduunka, waxaana loogu talagalay inay awood u yeeshaan inay xogtaan si xor ah ku helaan.
Cate waxaa laga heli karaa Github
Barnaamijka ESA Cate (Sawir tusaale ah oo ka socda ITC's Github)
Waaxda mas'uulka ka ah qorshahan ayaa ah CCI, xogta Hindisaha Isbadalka Cimilada, ee ka socota ESA. Si aad u awoodo inaad gasho qalabkan cajiibka ah, samee oo keliya riix halkan iyo marin u hel websaydhka "Github" oo ay CCI ka fududeeyso soo dejinta Cate waxayna sharxayaan sida ay u shaqeyso. Qaab qallafsan iyo kuwa aan aqoonba, "Github" waxay la mid tahay nooc ka mid ah "baloog" koodhadh noqon kara mid guud ama mid gaar ah. Xaqiiqda ah in Cate uu haatan yahay mid dadweynaha ah, wuxuu kasbaday wax ka badan muuqaalka iyo waxtar u leh kuwa u baahan inay adeegsadaan. Sidee?
Isticmaalayaasha laftoodu way horumarin karaan xeerarka Github. Taasi waa, haddii qof uu leeyahay soo jeedin, tusaale ama qalab, kaliya ma wadaagayaan, haddii ay leeyihiin wax horumar ah, adeegsadayaasha kale ayaa daryeeli kara hagaajinta. Wadashaqeyntan ayaa muujineysa natiijooyin wanaagsan barnaamijyada ama xeerarka, marka loo eego kuwa qofku keligiis ku guuleysan lahaa. Iyo wax kale, qof kastaa wuu arki karaa "lambarkaaga", markaa maahan oo keliya in wax la hagaajiyo, sumcaddaada iyo shaqadaaguba sidoo kale waa la qiimeyn karaa oo waxtar ayey u yeelan kartaa munaasabadaha mustaqbalka. Ma xuma sax?
Hindisaha Isbadalka Cimilada ee ESA wuxuu qaaday tallaabo horay loo qaaday, iyadoo hadda qalabkeeda u furtay adduunka. Kaliya saynisyahannadu ma awoodi doonaan inay dhahaan, waxaan joognaa albaab hortiisa halkaasoo barnaamijyayaashu ay awood u yeelan doonaan inay wax dhaafaan oo ay sharraxaan inay arkayaan waxa run ahaantii dhacaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Khayraadka » ESA waxay sii deysaa Cate, oo ah iskuxirka falanqaynta cimilada
U beddelka gaasaska lagu koriyo dhagxaanta, waa tallaabo wax ku ool ah oo lagu xakameynayo kuleylka adduunka